विमान अपहरणका २० वर्ष : कसरी पुग्यो विमानसम्म हतियार ? तथ्य रहस्यमै « लुम्बिनी सञ्चार
विमान अपहरणका २० वर्ष : कसरी पुग्यो विमानसम्म हतियार ? तथ्य रहस्यमै
प्रकाशित मिति : 26 December, 2019 6:51 am
काठमाडौं, १० पुस । ठीक २० वर्षअघि ९ पुस ०५६, काठमाडौंमा अन्य दिनभन्दा चिसो बढेको थियो । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा उडानहरू तोकिएको समयमा हुन सकेका थिएनन् ।
इन्डियन एयरलाइन्सको आइसी–८१४ विमानको काठमाडौं–दिल्ली उडान समय दिउँसो २ बजेको थियो । तर, ४ बजे मात्र उडान भयो । त्यस दिन काठमाडौंको मौसम मात्र होइन, विमानस्थलको सुरक्षा व्यवस्था पनि खराब थियो । विभिन्न देशका एक सय ७६ यात्रु बोकेको यो विमान काठमाडौंबाट उडेको केही मिनेटमै हाइज्याकरको कब्जामा पुग्यो ।
यो घटनाले विश्वमै ठूलो हचचल मच्चायो । नेपालको सुरक्षा व्यवस्थाको चर्काे आलोचना पनि भयो । सरकारले विभिन्न छानबिन समिति गठन गर्‍यो । तर, २० वर्ष बित्दा पनि अपहरणकारीले कसरी विमान अपहरण गरे भन्ने अहिलेसम्म पत्ता लाग्न सकेको छैन । बुधबार यो घटनाको ठीक २० वर्ष पुगेको छ ।
घटनापछि सरकारले नेपाल प्रहरीका पूर्वमहानिरीक्षक हेमबहादुर सिंहको अध्यक्षतामा छानबिन समिति बनाएको थियो । समितिले त्यतिवेला विमानस्थलमा खटिएका प्रहरी, कर्मचारीलगायतसँग सोधपुछ गरेको थियो । ‘तर, विमानसम्म हतियार लैजान अपहरणकारी कसरी सफल भए भन्ने कुरा पत्ता लाग्न सकेन, अहिलेसम्म रहस्यमै छ,’ त्यतिबेला नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको सुरक्षा महाशाखामा कार्यरत भरत ढकालले भनेका  नयाँ पत्रिका दैनिकमा समाचार छ।
धादिङको धुनिवेशी नगरपालिकाले ल्यायाे रू. ८८ करोड ९३ लाख २६ हजारकाे बजेट
अर्घाखाँचीको सन्धिखर्क नगरपालिकाले ल्यायो रू. १ अर्ब ११ करोड बजेट